Home – Somali Embassy Ankara
Wargelin Muhiim ah
Consular Services, Home / By Ifrah Abdi
Safaaradda Jamhuuriyadda Fedeelaarka Soomaaliya ee Dalka Turkiga waxay dhamaan ku wargelinaysaa muwaadiniinteeda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Turkiga ee u soo doonta adeegyadda dokumeentiyada ah. In habkii adeega gacanta(manual) laga guuray oo habka casriga ah (digital)ka loo wareegay. Sidaas darteed dadka u soo doonanaya adeegayada safaaradda waa in ay soo qaataan baasaboorka laftigiisa(Orginal passaport). Sababtoo ah …
Wargelin Muhiim ah Read More »
Qunsuliyada Soomaaliya – Ankara
Home, News / By Embassy of Somalia Ankara
Qunsuliyada safaarada soomaaliya ee Ankara Turkiga, waxay kashaqaynaysaa una taagan tahay ilaalinta sumacada iyo karaamada Soomaaliyeed. Waxaykaloo kudadaalaysa adkaynta iyo hubinta sharciyada dokumeentiyada la tasdiiqayo si loo helo in lagu kalsoonaado dokumeentiga soomaaliga ah. Waxaan kacodsanaynaa muwaadiniinta soomaaliyeed inay nagala shaqeeyaan sax ahaanta waraaqaha ay doonayaan in loo tasdiiqo soona mariyaan haya”adaha kushaqadaleh. Qunsuliyadu waxay …
Qunsuliyada Soomaaliya – Ankara Read More »